Daraasad Soomaalida ku dartay bulshooyinka caddaanka ah oo hadal heyn abuurtay | Gaaroodi News
Baraha Bulshada waxaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn loogu hadal hayay warbixin kasoo baxday Jaamacadda California ee dalka Mareykanka – oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu waaweyn caalamka – taasoo bulshada soomaalida ah ku dartay liiska jinsiyadaha caddaanka ah.
Ma cadda in arrintan ay ku timid si khalad ah iyo in kale. Hase yeeshee waxaa mar qura lagu baraarugay qeexitaanka jinsiyadaha asalka ah ee ay jaamacaddaas daraasadda ka sameysay.
Dadka qaar ayaa mowduucan u qaatay maadeysi, iyagoo baraha bulshada ku sheegayay inuu yahay wax lagu qoslo.
Shakhsiyaadka uga falceliyay dhinaca internet-ka waxaa ka mid ah Barsaroor Faysal Rooble, oo ah macallin wax ka dhiga jaamacad ku taalla dalka Mareykanka.
“Maxay Jaamacada aduunka ugu tanka weyn ee Uiversity of California Soomaalida uga sheegtay in ay bulsho weynta cadaanka ah ka tirsanyihiin? Cajiib!”, ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay Facebook-giisa.
Sidoo kale waxaa hab ay ku dheehan tahay shactrio u wajahay Mowliid Xujaale, oo ah wariye ka shaqeeya arrimaha bani’aadannimada.
“Jaamacadda California waxay Soomaalida ku qeexday “Caddaan” tanina waxaa loola jeedaa cilmibaadhis seynis ah oo lagu sameeyay kala saaridda asalka dadka. Halaga qariyo Soomaalidii wareersanayd ee ka faani jirtay midabka Madowga!” ayuu soo qoray.
Qof ka mid ah dadka Soomaalida ah ee baraha bulshada uga hadlay arrintan ayaa sheegay in mar walba waddanka uu joogo looga aqoonsan yahay qof Afrikaan ah ama madow.
“Wax la rumeysan karo ma aha. Waan ogahay inaan Afrikaan madow ahay, waddanka aan ku noolahayna waxaa la igu tiriyaa dadka madow. Liiskan waxaa sameeyay qof aan khibrad aqooneed lahayn oo ku sugan Mareykanka. Sidaas awgeed qofkaas wuxuu google ka raadiyay waddamada Carabta, Soomaalida ayaana kasoo dhex muuqatay, laakiin Carabtu waa dad midab leh sida dadka madow ay midabka u leeyihiin oo kale, mana aha caddaan,” ayuu yidhi.
Qof kale oo isla baraha bulshada ku fal celiyay ayaa yidhi: “Ninkii caddaa waa dad raadis marka is balaarin buu wadaa ma is tiri? North Africa iyo carabtii Asia oo dhan baa la cadeeyey wax innaga gaar inoo ah ma aha (Egypt, Sudan, Jbouti, Morocco, Mauritania iyo in kaloo badanba waa la cadeeyey). Yaab!.”
Qof uu ra’yigiisu ka duwan yahay sidaas ayaase soo qoray: “Soomaali badan oo ku nool Waqooyiga Ameerika ma aaminsana inay madow yihiin. Marka haddii aannaan ahayn madow waxaan nahay Caddaan, marba haddii uusan jirin wax u dhaxeeya.”
Isku dayo aan u sameynay si aan ula xidhiidhno mas’uuliyiinta Jaamacadda, waxna ka weydiinno sida liiskaas loo diyaariyay, ayaa noo suuragali waayay